Mustafe Cagjar: “Marnaba uma dulqaadan doonno shakhsiyaadka u gacan-haadinaya TPLF” – Radio Daljir
Luulyo 2, 2021 1:05 g 0
Madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Mustaf Maxamed Cagjar ayaa sheegay in maamulkooda uu tilaabo adag uu ka qaadi doono shaqsiyaadka taageerada u ah in TPLF ay dib ula wareegto talada dalka Itoobiya.
Waxaa uu sidoo kale tilmaamay in dhammaan la adkeeyay Ammaanka magaalooyinka dowlad degaanka Soomaalida si looga hortaggo in ay ka dhacaan falal Amni daro inta ay socdaan howlgallada.
“Marnaba uma dulqaadan doonno shakhsiyaadka u gacan-haadinaya ururkii 30-kii sanno ee tegay baabi’inayey bulshada Soomaaliyeed dhinac dhaqaale iyo mid bulshaba”.
Ugu dambeyntii waxaa uu tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed laga doonaayo in ay xasuusnaanadaan xasuuqii ka dhacay dowlad degaanka oo uu sheegay in TPLF ay ka dambeysay.
Maraykanka oo xaqiijiyay in ciidamo Soomaali ay ku sugan yihiin gudaha Ethiopia